Daawo: Galmudug & Ahlu Sunna oo heshiiyay iyo Maamul sameysi oo la kala saxiixday | KEYDMEDIA ONLINE
Daawo: Galmudug & Ahlu Sunna oo heshiiyay iyo Maamul sameysi oo la kala saxiixday
Gaalkacyo (KON) - Maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna Waljamaaca oo maalmahaan ku Shirayay Magaalada Gaalkacyo ayaa Heshiis Hordhac ah gaareen oo ay isku raaceen in la sameeyo Maamul goboleed ay ku mideysan yihiin oo ka howlgala gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Kulankaan ayaa Magaalada Gaalkacyo lagu soo xiray waxaana kala saxiixday madaxweynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid) iyo guddoomiyaha saddexda gole ee maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guureeye.
Madaxweynaha Galmudug Cabdi Qaybdiid ayaa wuxuu sheegay in loo baahanyahay in deegaanada isku dhow leesku darsado Maamulka isla markaana laga wada shqeeyo horumarinta.
Dhawaan ayaa laga wada hadli doonaa sidii loo dhisi lahaa Maamul.
Dhageyso Khudbada Madaxweynaha Galmudug: Halkaan Guji
Gobalada Dhexe iyo Maamulada ka Jira
Gobaladaan ayaa haatan waxaa ka jira maamulo badan oo aanan lahayn wax xariir ah, ama wada shaqayn midana.
Qaybo ka mid ah waxaa ka arimiya Maamul hoostaga dowlada Soomaaliya, halka qayb kalana ay joogaan ciidamo ama dagaalyahano kale oo ka tirsan Al-Shabaab, labada dhinacna dagaal ayaa ka dhaxeeya.
2. Gobalka Galgaduud
Qaybo ka mid ah gobalkaan waxaa ka arimiya maamul Ahlu Suna, qayb kalana waxaa ka arimiya Al-Shabaab, Qaybo kalana waxaa ka jira maamulka Ximan iyo Xeeb, sadaxdaan maamulna ma jiraan wax xiriir ah oo ka dhaxeeya.
3. Gobalka Mudug
Qaybo ka mid ah gobalkaan waxaa ka taliya Maamulka Galmudug, qaybo kalana waxaa ka arimiya Maamulka Puntland, deegaanada qaarna waxaa isku heesta Galmudug iyo Ximan iyo Xeeb.
Markii loo eego Dastuurka Soomaaliya oo dhigaya labo gobal iyo wixii ka badan in ay noqon karaan Maamul gobaleed, dhamaana maamuladaan ma ahan kuwo sharci ku taagan mana jiro maamul heesta labo gabal iska daa wax ka sii badane.
Keydmedia Online - Xafiiska Gaalkacyo / Muqdisho